Nezvedu - Shijiazhuang Donghuan nyore kufurirwa Iron Castings Co., Ltd.
Shijiazhuang Donghuan nyore kufurirwa Iron Castings CO., LTD
Fekitori yedu inyanzvi yekugadzira pombi fittings kweanopfuura makore makumi matatu. Iri kugovera nyore kufurirwa simbi fittings, Ductile simbi fittings, Grey simbi fittings uye zvimwe zvigadzirwa zvesimbi, ine nhoroondo refu uye isingachinji kutenda kwekugadzira mhando yepamusoro zvigadzirwa.
Zvigadzirwa zvikuru: Inotakurika simbi nyere fittings, Tube inosungisa, Mhepo hosi yekubatanidza, Camlock coupling, Carbon simbi pombi minyatso, Magetsi magetsi fittings, Steam coupling, Gita mita yekubatanidza etc.
A.Umbwa muna 1986, Covering zviuru gumi nemaviri metres, kuva vashandi vanopfuura 200. Tine mari yakanyoreswa yemamirioni e8.88, uye yegore rekutengesa kunze kwemamirioni gumi emadhora.
B. Seye yepamusoro-tech bhizinesi, isu tine yedu R & D timu, iyo inogona kuvhura mafuru kuburikidza nesampuli kana madhirowa akapihwa nevatengi, uye kunyangwe kubatsira vatengi mukugadzira zvigadzirwa zvitsva kuburikidza netsananguro dzinoshanda.
C. Kubva pakutenga zvinhu, kukanda, kuwedzera, kudimbura, kugadzira, kugadzira, kurongedza, kutumira, kutumira, kugadzira system yekumisa.
D. Nzira dzakasiyana dzekukanda: Parizvino 90% yezvigadzirwa zvakachinjirwa kugadzirwa kwejecha kwakafukidzwa. Uye vakapakata zvemapuranga jecha dzaFord, izvo zvinogona kudzora unhu zvinodiwa jira zvemapuranga, uye zvemapuranga jecha akavigwa bhokisi Kudzingwa mutsetse, mberi kuvandudza kunaka zvigadzirwa. Yakawanda yakakodzera nzira yekukanda inogona kutsanangurwa zvinoenderana nechero zvigadzirwa.
E. vachikanda pamusoro: yedu yakaongororwa mishonga yejecha uye chakuumbwa dhizaini inoshandiswa, hapana yekubatana mutsetse, hapana kusuduruka, hapana jecha kuiswa, hapana kutsemuka pane zvigadzirwa, isu tichagutsa wese mutengi.
F. Simbiso yezvinhu: pa -the -spot sampuro yekuongorora + makemikari ekuongorora mushure mekukanda, kuyedzwa kaviri kuti uve nechokwadi chekugadzikana kwezvinhu. Magetsi kudziyisa otomatiki tembiricha yekudzora michina inogona kunyatso kudzora vira rinopisa zvakaenzana kuona kuti chigadzirwa chiri nechete kusimba.
G. Surface kurapwa: self-color + ngura inodzivirira mafuta, electroplating, inopisa dip galvanizing, kutanga electroplating uye ipapo kupisa dip galvanizing, kutanga electroplating uye ipapo kutsigira galvanizing, kutanga electroplating uyezve kupuromesa kwepurasitiki. Zvigadzirwa zvakasiyana zvinoda kurapwa kwepamusoro kwakasiyana, kurapwa kwepamusoro kunogona kutsanangurwa maererano nezvakagadzirwa zvakasiyana.
H. Mashini maitiro: Tine michina yehunyanzvi yekukochekera uye CNC lathes yekugadzira tambo, tambo dziri 100% mukati meiyo yakatarwa chiyero chejiji uye plug geji, inosanganisirwa angle yetambo iri mukati me90 ° + -0.5 °. Kubudirira kwepamusoro uye mhando yepamusoro inogadzira nzira inoita kuti zvigadzirwa zvedu zvive nemusika wakakosha.
I. Zvitupa zvedu: Fekitori yedu yakapasa TSE yeTurkey, INMETRO yekuBrazil, uye CE, ISO9001: 2008, IQNET nezvimwe.
J. Vatengi vedu: Fekitori yedu iri kushandira pamwe neakawanda anozivikanwa emabhizinesi, musika mukuru wezvinhu nyore kufambisa simbi fittings ndeye Europe, musika mukuru wepombi yekukochekera fittings iUK, uye musika mukuru wemhepo hosipaipi yekubatanidza iUS. Kune zvakare akawanda marudzi akasiyana ezvigadzirwa zvehunyanzvi kunyorera, uye anobatsira kwazvo muminda yavo.
YeBritish standard yakashongedzwa nyore kufurirwa iron pipe fittings
American mureza yakasungwa nyore kufurirwa iron pipe pipe fittings
YeBritish standard yakasungwa nyore kufurirwa simbi mutopota fittings
Din en10242 yakajairwa beaded nyore kufurirwa iron pipe pipe fittings
Mhepo hosi yekubatanidza & Double bhaudhi hositi inosunga
Carbon simbi pombi minyatso
Simba remagetsi fttings
Stainless simbi nyere fttings
Ground majoini akabatanidzwa
Air Hose payakabatanidzwa, Stainless Simbi Minyatso Uye Fittings, Stainless Simbi Minyatso, Mhepo Hose yekubatanidza Europen Rudzi, Stainless Simbi Pipe Minyatso, Kubatanidza Air Hose,